Iplagi yeWordPress: Vula iVidiyo kwibhokisi yokuKhanya ene-Elementor | Martech Zone
Iplagi yeWordPress: Vula iVidiyo kwibhokisi yokuKhanya ene-Elementor
NgeCawa, Oktobha 18, 2020 NgeCawa, Oktobha 18, 2020 Douglas Karr
Samkele iwebhusayithi kunye nomthengi eyakhiwe naye Mlawuli, iplagi emnandi yokutsala kunye nokwehla kweWordPress eguqula indlela ekulula ngayo ukwakha izakhiwo ezintsokothileyo, ezintle eziphendulayo… ngaphandle kwenkqubo okanye isidingo sokuqonda iikhowudi ezimfutshane.
Elementor inezithintelo, enye yazo ndabaleka ndasebenza kwindawo yabathengi. Bafuna nje iqhosha elivule ividiyo kwiLightbox ... into engenziyo ngu-Elementor. Ungasebenza ujikeleze umba usebenzisa umfanekiso kunye okanye ngaphandle kweqhosha lokudlala… kodwa i-Elementor inento enkulu yamaqhosha. Ndiyamangaliswa kukuba bengakhange bayinike le bhokisi.
Ngombulelo, kukho iplagi yento!
Izongezo ezibalulekileyo ze-Elementor
Ngombulelo, kukho izongezo ezininzi ezintle ze-Elementor ngaphandle kwintengiso. Kuya kufuneka ulumke xa ukhetha umphuhlisi weplagin, nangona. Ukuba nesiza seWordPress esakhelwe kwi-Elementor kudala ukuxhomekeka kwi-Elementor. Ke ukuba nesongezo esakhelwe ngomnye umthengisi kudala ukuxhomekeka. Kubalulekile kwimpumelelo yendawo yakho yeWordPress ukuqinisekisa ukuba umphuhlisi we-plugin unokufakwa okuninzi kunye nengeniso ehambelana nokugcina kunye nokuphucula iiplagi njengoko iinguqulelo zeWordPress kunye ne-Elementor zihlaziywa.
Iplagi enye emnandi yile Izongezo ezibalulekileyo ze-Elementor. Ngofakelo olungaphezulu kwama-800,000, iplagi inokuba yeyona nto idumileyo yokongeza iplagi ye-Elementor kwintengiso. Inqaku eliphambili kule iplagi kukukwazi ukongeza ngokulula kunye nokumisela ibhokisi ekhanyayo kwiwebhusayithi yakho yeWordPress eyakhelwe nge-Elementor.
Iqhosha le-Elementor Lightbox
Nje ukuba ufake uhlobo oluhlawulelweyo lweZongezelelo ze-Ons kwi-Elementor plugin, yenza ukuba Ibhokisi lebhokisi kunye neModyuli uphawu lokujonga into kwizinto zakho ze-Elementor. Emva koko unokukhangela kwaye uyitsale kwiphepha lakho ngokulula:
Emva koko uya kufuna ukutshintsha useto lwesibini lwento:
Cwangcisa Useto> Ukucofa ku Cofa iqhosha
Cwangcisa Useto> Chwetheza ku iqhosha
Cwangcisa Useto> Isicatshulwa samaqhosha
Cwangcisa umxholo> Chwetheza ku Qhagamshela kwiphepha / kwiVidiyo / kwimephu
Cwangcisa umxholo> Nika iphepha / ividiyo / imephu ye-URL kwi-URL yeVidiyo yakho
Unokwenza ngokwezifiso ibhokisi elikhanyayo kunye nesitayile seqhosha njengoko kufuneka. Ngamava angenamthungo phakathi kwale add-on kunye ne-Elementor.
Ngelixa inqaku elihamba kunye kunokuba kufanelekile ukulihlawula, ii-Add-Ons ezifunekayo ze-Elementor plugin zinetoni yezinye izinto ezibandakanyiweyo zombini simahla kunye nohlobo oluhlawulelweyo. Qaphela: Ukusebenza kweLightbox kuhlobo oluhlawulelweyo.
Izongezo ezibalulekileyo ze-Elementor: Izinto ezisimahla
Inguqulelo yasimahla inezinto ezisisiseko ezinokongezwa:
Ibhokisi yoLwazi -Bonisa ulwazi oluphambili ngohlobo lweBhokisi yoLwazi ngokongeza i-Icon ephezulu kunye nokongeza iimpembelelo zoopopayi.
I-Accordion ePhambili -Bonisa umxholo, vumela i-icon yokutshintsha, gcwalisa icandelo lekhonsathi ngesicatshulwa osifunayo kwaye uyenze ibonakale inxibelelana nabaphulaphuli.
Igridi yeMveliso yeWoo -Bonisa iimveliso ze-WooCommerce naphina kwaye ubonise iimveliso kudidi, iithegi, okanye iimpawu. Yongeza ngokulula imiphumo yokuhambisa phezulu kulwakhiwo ukuze lumangalisa.
Ibhokisi yeFlip -Bonisa umxholo kakuhle ngeflip ngasekhohlo / oopopayi basekunene kwi-hover yemouse.
Iithebhu eziPhambili -Bonisa ulwazi oluphambili ngendlela yokunxibelelana exhasa uyilo lweetabs ezenziwe ngokwezifiso ukutsala abaphulaphuli kwimeko.
Itheyibhile yexabiso -Yila itafile yamaxabiso emveliso esebenzayo kunye nesitayile esifanelekileyo ukuze ufumane ukuthengisa ngakumbi kubathengi bakho.
I-Accordion yomfanekiso -Gqamisa imifanekiso yakho nge-hover emangalisayo kwaye ucofe iziphumo usebenzisa i-EA Image Accordion.
Thumela iGridi -Bonisa iiposti zebhlog ezininzi kuyilo lwegridi. Unokukhetha uyilo olukhethiweyo kuseto lobeko, ukongeza oopopayi kulo, kwaye ulwenze lukhangeleke lisebenzisana neendwendwe.
Biza kwisenzo - Faka isitayile somnxeba kumxholo wento, umbala, kwaye uyiqhagamshele ukuhambisa iindwendwe kwinto oyifunayo.
Countdown -Yakha uyilo lwexesha ukusuka kukhetho lweendlela ezahlukeneyo.
Ixesha lePosi -Bonisa iiposti zebhlog, amaphepha, okanye iiposti zesiko kulungelelwaniso olumi nkqo. Unokuseta inani lezithuba ozikhethileyo, yongeza imiphumo emangalisayo, ukugqume umfanekiso, iqhosha, kunye nokunye ukutsala umdla wabaphulaphuli.
Iifilitha eziHluziweyo-bonisa imifanekiso eneendidi ezahlukeneyo, iZimbo zegridi, kwaye wenze ngokwezifiso uyilo luphela ukuqinisekisa ukubonakala okungaqhelekanga.
Khuphela ii-Add-On ezibalulekileyo ze-Elementor
Izongezo ezibalulekileyo ze-Elementor: Izinto ezihlawulelweyo
Ngohlobo oluhlawulelweyo, ufumana iitoni ezininzi ezizezona zinto zibonelela ngobuchule kumxholo osekwe kwi-Elementor.
Ibhokisi yokukhanya kunye neModyuli -Bonisa iividiyo zakho, imifanekiso, okanye omnye umxholo ngokuzivelelayo. Ungaseta amanyathelo afunekayo okuqala, yongeza oopopayi, kwaye usete uyilo ukuze wandise ukubandakanyeka.
Thelekisa umfanekiso -Xhobisa abathengi bakho ukuba bathelekise phakathi kwemifanekiso yakho emibini yemveliso (Endala kuthelekiswa neNtsha) ngendlela emangalisayo.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Carousel -Khetha umnqweno wakho we-carousel effect, yongeza ilogo kunye nesitayile semveliso ukubonisa bonke abathengi bakho okanye amaqabane kakuhle.
Iziphumo zeParlax -Vumela iindwendwe zakho ukuba zibone indawo yakho enezinto ezininzi ezahlukileyo ezibonisa ukudibana kwe-mouse.
Promo -Yongeza isihloko esinomtsalane, umxholo wangaphakathi, umxholo wempuku kunye nemifanekiso emihle yokutsala umdla wotyelelo lwakho.
Ukuguqula umxholo - Yongeza isiphumo sokuhambisa phezulu kumxholo wakho oqaqambisa umahluko onqwenela ukuba iindwendwe zakho zigxile kuwo.
Google Maps -Lungiselela into yemephu, yongeza ii-icon zeempawu, kwaye uyenze isebenzisane neendwendwe.
Iziphumo zeParticle - yongeza amacandelo okudala kwiwebhusayithi yakho ukuze ibonakale.
Amakhadi asebenzisanayo -Zisa ubuchule obuphambili njengokuskrola kwangaphakathi kunye nefuthe lokuhambisa phezulu kwiibhloko zakho zomxholo.
Content Protected - thintela umxholo kunye negama eligqithisiweyo okanye ngendima yomsebenzisi.
Iposi -Bonisa iiposti zebhlog yakho ngeendlela ezahlukeneyo usebenzisa amandla eCSS Flex yanamhlanje. Unokukhetha ubeko, ukongeza oopopayi, ukongeza i icon, kunye nesitayile sayo yonke into- kubandakanya nefuthe lokuhambisa phezulu.
Ingcebiso yezixhobo - yongeza iincam zesixhobo ngaphezulu nangaphantsi komxholo.
Ukuhamba kwelinye iphepha -Yakha iwebhusayithi enye yekhasi elinonqakrazo olumbalwa usebenzisa i-Elementor.
Isilayidi sobungqina -Yenza ibhodi yokunxibelelana enxibelelana ebonisa uphononongo oluninzi kakuhle kwindawo enye yomxholo.
Instagram -Bamba ingqalelo yendawo yakho yokundwendwela kwaye uqhube ngakumbi abalandeli be-Instagram ngokubonisa i-Instagram feed kwindawo yakho.
Imifanekiso yeHotspot - yongeza indawo eneendawo zemifanekiso enezixhobo zesiko, ukuze umsebenzisi acofe kwiindawo zokuhlala ukubonisa umxholo onxulumene noko.
Inketho kunye ne-plugin endiyixabisa kakhulu kukukwazi ukwenza okanye ukukhubaza nganye yezi zinto zikule ndawo. Oku kuthintela ngaphezulu kwento nganye ebhaliweyo kwisongezelelo kwindawo yakho.
tags: iqhoshaelementorIzongezo zokuqalaiqhosha elementorividiyo yebhokisi elulaWordPressumhleli wegamaiplagi yamagama
Elementor: Umhleli oMangalisayo wokuYila amaPhepha amaNqaku aMnandi kwi-WordPress kunye neZithuba